Q & A – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. G6PD ကလေးအတွက် ဘာတွေရှောင်ဖို့ လိုပါသလဲ။ A. G6PD က အရမ်းကြီး ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ အဓိကကတော့ တောင်ကြီးပဲ၊ ပဲကြီးတို့လို အစားအသောက်တွေနဲ့ပဲ မတည့်တာပါ။ ကျန်တဲ့ ကုလားပဲ၊...
ကလေးခြောက်လပြည့်လို့ ဖြည့်စွက်စာကျွေးမယ်ဆိုရင် . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကလေးခြောက်လပြည့်လို့ ဖြည့်စွက်စာကျွေးရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွေးလို့ရသလဲ။ A. ခြောက်လပြည့်ရင် ဖြည့်စွက်စာကျွေးလို့ ရပါပြီ။ ထမင်းကို ကျိုပြီးရင် Blender နဲ့ ကြိတ်ရပါမယ်။ ကြိတ်ပြီးရင် တစ်ခေါက်ပြန်ကျိုပြီးမှ ကျွေးရပါမယ်။
—၊ ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆေးပညာဌာန ၊— Q. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက ဘယ်လောက်အထိ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကတော့ ဆက်စပ်မှု အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမဖြစ်ခင် တစ်မျိုး၊ ဖြစ်ပြီးရင်...